Qarxinta COVID ee Qaaradda Afrika: US $ 7.7 Bilyan Adduunku ma awoodi karo inuu diido
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caafimaadka Warka » Qarxinta COVID ee Qaaradda Afrika: US $ 7.7 Bilyan Adduunku ma awoodi karo inuu diido
Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Wararka Koofur Afrika • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
WHO: 90% ee adeegyada caafimaadka wadamada ayaa wali waxaa carqaladeynaya CUDURKA-19 faafa
Kala duwanaanshaha Delta wuxuu adduunka geliyaa taageero toos ah. Dunidu waxay ku jirtaa halis, laakiin ma jiro gobol ka badan Afrika. WHO hadda waxay Afrika ugu baahan tahay $ 7.7 bilyan, duniduna ma awooddo inay iska indho tirto. Sida uu yiri Madaxweynaha Mareykanka Biden: “Dhammaanteen waan wada joognaa. qofna ma badbaado ilaa qof walba nabad helo. ”
Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa Afrika ka sheegay, dhimashada ayaa korortay 80% kaliya 4 -tii toddobaad ee la soo dhaafay. Inta badan kororkan waxaa kaxeeya kala duwanaanshaha Delta ee aadka loo kala qaadi karo, kaas oo hadda laga helay ugu yaraan 132 dal.
WHO waxay ku taageeraysaa waddamada sahayda oksijiinta, iyada oo la siinayo hagitaan si waddammada looga caawiyo inay si fiican u ogaadaan noocyada kala duwan, waxaanan sii wadnaa inaan maalin walba la shaqeyno shabakadahayaga khubarada adduunka si aan u fahanno sababta kala -duwanaanshaha Delta uu si fudud ugu faafo.
Ujeeddada WHO ayaa weli ah inay ka taageerto waddan walba inay tallaalaan ugu yaraan 10% dadkeeda dhammaadka Sebtember, ugu yaraan 40% dhammaadka sannadkan, iyo 70% badhtamaha sannadka dambe. In ka yar 2% dhammaan qiyaasaha laga maamulo caalamka ayaa ku sugnaa Afrika. Kaliya 1.5% dadka qaaradda ayaa si buuxda loo tallaaley.
Maanta WHO waxay qaaday tallaabo kale oo hore loo qaaday, iyadoo leh warqad ujeeddo ah oo qeexaysa shuruudaha wada -shaqayneed ee ay saxeexeen la -hawlgalayaasha xarunta: WHO; Barkadda Daawooyinka ee Daawooyinka; Afrigen Biologics; Machadka Bayoolojiga iyo Tallaalka ee Koonfurta Afrika; Golaha Cilmi -baarista Caafimaadka Koonfur Afrika iyo Xarumaha Xakamaynta iyo Ka -hortagga Cudurrada Afrika.
Ujeeddada WHO ayaa weli ah inay ka taageerto waddan walba inuu tallaalayo ugu yaraan 10% dadkeeda dhammaadka bisha Sebtember, ugu yaraan 40% dhammaadka sannadkan, iyo 70% bartamaha sannadka soo socda. In ka yar 2% dhammaan qiyaasaha dunida laga maamulo waxay ku sugnaayeen Afrika. Kaliya 1.5% dadka qaaradda ayaa si buuxda loo tallaaley.
Iyada oo laga jawaabayo qulqulka Delta, maanta Helitaanka Qalabka COVID-19 Dardar-geliyaha wuxuu bilaabayaa Jawaabta Degdegga ah ee ACT-Accelerator Delta, ama RADAR, isagoo soo saaraya baaq degdeg ah oo ah 7.7 bilyan oo doollarka Mareykanka ah oo loogu talagalay baaritaannada, daaweynta, iyo tallaallada.
Si taa la mid ah, waxaan u baahan doonnaa maalgelin dheeraad ah sannadkan COVAX si ay u adeegsato ikhtiyaarkeeda si ay u iibsato tallaallada 2022.
Agaasimaha guud ee Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa madax u ah Ururka Caafimaadka Adduunka waxaana magacaaba, oo mas'uul ka ah Golaha Caafimaadka Adduunka. Agaasimaha guud ee hadda waa Tedros Adhanom, oo la magacaabay 1dii Luulyo 2017
Wuxuu ka hadlay shirkii jaraa'id ee shalay ee la xiriira Gobolka COVID-19 ee Afrika.
Subax wanaagsan, galab wanaagsan, iyo fiid wanaagsan.
Toddobaadkan horaantiisii, waxaan sharaf u lahaa inaan u safro Baxrayn iyo Kuwait, halkaas oo WHO ay ka furtay labadeena xafiis ee dalka ugu cusub.
Waxaan sidoo kale fursad u helay inaan booqdo dhowr xarumood oo loo sameeyay inay ka jawaabaan COVID-19 oo aad ula dhacay habka cusub ee dhammaystiran.
Hadda waxaan leenahay 152 xafiis oo dalka ku baahsan adduunka. Waxay udub dhexaad u yihiin waxa WHO qabato - waddamada taageera si ay u xoojiyaan nidaamyada caafimaadka ayna u hagaajiyaan caafimaadka dadkooda.
Intaas ka hor, waxaa sharaf ii ahayd in laygu martiqaado Tokyo si aan ula hadlo Guddiga Olombikada Caalamiga ah.
Waxaan u tegey inaan ka jawaabo su'aal inta badan la i weydiiyo: goorma ayuu masiibadu dhammaan doontaa?
Jawaabtaydu waxay ahayd in masiibada ay dhammaan doonto marka adduunku doorto inuu joojiyo. Waxay ku jirtaa gacmaheena.
Waxaan haysannaa dhammaan qalabkii aan u baahnayn: waan ka hortagi karnaa cudurkan, waan baari karnaa, waana daaweyn karnaa.
Hadana ilaa shirkeenii jaraa'id ee ugu dambeeyay, kiisaska iyo dhimashada COVID-19 ayaa sii waday inay koraan.
Ku dhawaad ​​4 milyan oo kiis ayaa loo soo sheegay WHO toddobaadkii la soo dhaafay, iyo isbeddellada hadda jira, waxaan filaynaa in tirada guud ee kiisaska ay dhaafi doonaan 200 milyan labada toddobaad ee soo socda. Waana ognahay in taasi tahay dhayalsi.
Celcelis ahaan, shan ka mid ah lixda gobol ee WHO, caabuqyada ayaa kordhay 80%, ama ku dhowaad labanlaabmay, afartii toddobaad ee la soo dhaafay. Afrika gudaheeda, dhimashadu waxay kordhay 80% isla muddadaas.
Inta badan kororkan waxaa kaxeeya kala duwanaanshaha Delta oo aad loo kala qaadi karo, kaas oo hadda laga helay ugu yaraan 132 dal.
WHO ayaa ka digtay in fayraska COVID-19 uu is-beddelayay tan iyo markii ugu horreysay ee la soo sheegay, welina wuu is-beddelaa. Illaa iyo hadda, afar nooc oo walaac ah ayaa soo baxay, waxaana jiri doona in ka badan inta fayrasku sii fidayo.
Kor u kaca ayaa sidoo kale waxaa horseeday isku -darka iyo dhaqdhaqaaqa bulshada oo kordhay, adeegsiga aan habboonayn ee caafimaadka dadweynaha iyo tallaabooyinka bulshada, iyo adeegsiga tallaalka oo aan sinnayn
Guulihii adkaa waxay halis ugu jiraan in la lumiyo, nidaamyada caafimaadka ee dalal badanna waa la buuxiyaa.
Tirada sii kordheysa ee caabuqyada ayaa abuureysa daaweyn yari sida oksijiinta nafaha badbaadiya.
Sagaal iyo labaatan dal ayaa leh baahiyo oksijiin oo sare u kacaya, dalal badanina waxay haystaan ​​sahay aan ku filnayn oo ah qalabka aasaasiga ah si loo ilaaliyo shaqaalaha caafimaadka safka hore.
Dhanka kale, heerarka tijaabinta ee waddamada dakhligoodu hooseeyo ayaa ka yar 2 boqolkiiba waxa ay ku sugan yihiin waddammada dhaqaalahoodu sarreeyo-taas oo adduunka ka dhigaysa mid indho la 'si loo fahmo halka cudurku ka jiro iyo sida uu isu beddelayo.
Iyada oo aan lahayn qiimeyn ka wanaagsan tan caalamka, kuma dagaallami karno cudurka jiidda hore ama ma yareyn karno noocyada kala duwan ee halista badan ee soo baxaya.
Laakiin waxaan u baahanahay wax intaa ka badan:
Waxaan u baahan nahay dabagal xooggan;
Waxaan u baahanahay tijaabooyin istiraatiijiyadeed oo dheeri ah si loo wanaajiyo fahamka caalamiga ah ee meesha uu fayrasku joogo, meesha waxqabadyada caafimaadka dadweynaha aad loogu baahan yahay, iyo in la go'doomiyo kiisaska lana yareeyo gudbinta;
Waxaan u baahanahay bukaanno si ay u helaan daryeel caafimaad oo hore shaqaale caafimaad oo tababaran oo la ilaaliyo, oo leh oksijiin badan si loo daweeyo dadka aadka u jiran iyo badbaadinta nolosha;
Waxaan u baahanahay shaqaale caafimaad oo si fiican loo tababaray oo si fiican loo ilaaliyo iyo nidaamyada lagu bixiyo adeegyada iyo qalabka lagu badbaadinayo nolosha;
Waxaan u baahannahay cilmi -baaris iyo horumarin dheeraad ah si aan u hubinno in baaritaannada, daaweynta, tallaallada, iyo aaladaha kale ay weli waxtar u leeyihiin kala duwanaanshaha Delta iyo kala duwanaanshaha kale ee soo baxaya;
Dabcan, waxaan u baahanahay tallaallo badan.
Bishii la soo dhaafay, waxaan ku dhawaaqnay inaan u samaynayno xarun gudbinta teknolojiyadda tallaallada mRNA ee Koonfur Afrika, taas oo qayb ka ah dadaallada aan ugu jirno inaan sare u qaadno soo -saarka tallaallada.
Maanta waxaan qaadnay tallaabo kale oo hore loo qaaday, oo leh warqad ujeeddo leh oo qeexaysa qodobbada wada -shaqayneed ee ay saxiixeen la -hawlgalayaasha xarunta: WHO; Barkadda Daawooyinka ee Daawooyinka; Afrigen Biologics; Machadka Bayoolojiga iyo Tallaalka ee Koonfurta Afrika; Golaha Cilmi -baarista Caafimaadka Koonfur Afrika iyo Xarumaha Xakamaynta iyo Ka -hortagga Cudurrada Afrika.
Ujeeddada WHO ayaa weli ah inay ka taageerto waddan walba inay tallaalaan ugu yaraan 10% dadkeeda dhammaadka Sebtember, ugu yaraan 40% dhammaadka sannadkan, iyo 70% badhtamaha sannadka dambe.
Waxaan meel fog u jirnaa inaan gaarno bartilmaameedyadaas.
Ilaa hadda, in ka badan kala bar dalal ayaa si buuxda u tallaalay 10%dadkooda, in ka yar rubuc waddan ayaa tallaalay 40%, 3 waddan oo keliya ayaa tallaalay 70%.
Ku dhawaad ​​hal sano ka hor, WHO waxay bilowday inay walaac ka muujiso halista 'qarannimada tallaalka';
Shir jaraa'id oo aan qabtay bishii Nofeembar, waxaan uga dignay halista ah in saboolka dunidu uu "ku tunto ciriiriga tallaallada";
Kulankii Guddiga Fulinta ee WHO bishii Jannaayo ee sannadkan, waxaan ku nidhi adduunku wuxuu qarka u saaran yahay “fashilka akhlaaqda xun”.
Hase yeeshee qaybinta caalamiga ah ee tallaallada ayaa weli ah mid aan caddaalad ahayn.
Dhammaan gobollada ayaa halis ku jira, laakiin ma jiro Afrika.
Isbeddellada hadda jira, ku dhawaad ​​70% dalalka Afrika ma gaari doonaan bartilmaameedka tallaalka 10% dhammaadka Sebtember.
Qiyaastii 3.5 milyan ilaa 4 milyan oo qiyaasood ayaa toddobaad walba laga maamulaa qaaradda, laakiin si loo gaaro bartilmaameedka Sebtembar waa inay kor u kacdaa 21 milyan oo qiyaasood ugu yaraan toddobaad kasta.
Dalal badan oo Afrikaan ah ayaa si wanaagsan isugu diyaariyay soo saarista tallaallada, laakiin tallaalladu ma aysan imaan.
In ka yar 2% dhammaan qiyaasaha laga maamulo caalamka ayaa ku sugnaa Afrika. Kaliya 1.5% dadka qaaradda ayaa si buuxda loo tallaaley.
Tani waa dhibaato aad u daran haddii aan tallaabo ka qaadno masiibadan oo aan joojinno.
Maalgashigani waa qayb yar oo ka mid ah qaddarrada ay dawladuhu ku bixiyaan wax ka qabashada COVID-19.
Su’aashu ma aha in adduunku awoodi karo inuu maalgashadan sameeyo; waa haddii aysan awoodin in aysan awoodin.
Mustajaba Xasan wuxuu leeyahay,
Ogosto 3, 2021 markay tahay 09:22
Mudane / Marwo
Qor Jntour iyo Safarka si aad wax uga weydiiso shirkaddaada
xiisayn lahaa in la sameeyo
kula ganacsato. Jntour & Travel Ltd waa shirkad fadhigeedu yahay Zanzibar, Tanzania
qorshee xirmooyinka gudaha si ay ugu habboonaato macmiilkayaga
baahiyaha. Waxaan jeclaan lahayn inaan kula shaqeyno wakiil ahaan.
Haddii ay jiraan wax su'aalo ah ama aad u baahan tahay inaad la xiriirto ha ka labalabeyn inaad
email noogu soo dir [emailka waa la ilaaliyay]
si loo caddeeyo. Ama si naxariis leh u booqo degelkeena
Arinta ugu fiican,
Agaasimaha Jntour Company ltd